Ceeryaamo awgeed oo dib loo dhigay cayaaro ka bilaaban lahaa Sotji - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cayaaraha Sotji oo ceeryaamo qarisay. Sawirle: TT
Ceeryaamo awgeed oo dib loo dhigay cayaaro ka bilaaban lahaa Sotji
La daabacay måndag 17 februari 2014 kl 10.03
Ceeryaamo ku habsatey magaalada Sotji ayaa keentay in dib loo dhigo cayaaraha fallaar-tuurka ee shalay bilaaban lahaa.
– Shalay ayey ahayd kolkii ceeryaamadu dusha kaga habsatay goobihii cayaartu ka dhici lahayd. Waxaana rajeyneynnaa in ay sidii ka soo roonaato maanta xilliga qadada kadib. Sidaasna waxaa idaacadda Raadiosporten u sheegay Tomas Mårtensson uu guddiga olimbiga u qaabbilsan saadaasha hawada.
Cayaartaas fallaar-tuurka ayey ahayd in la soo gabagabeeyo shalay afarta galabnimo, laakiin dib ayaa loo dhigay ilaa maanta subaxnimada. Balse saaka markii la ogaadey hawada Sotji ayaa misna cayaartii dib loo sii dhigay. Wararkii ugu dambeeyeyna waxay sheegayaan in la filayo in dib loo bilaabo maanta duhurnimada.
– Waxaa isku darsamay iftiinka qorraxda iyo dabaylo ka dhigay in waxba si fiican loo arki waayo. Si fallaaraha loo nishaabana waxaa loo baahan yahay in la arki karo 50 mitir iyo wixii ka badan. Maanta gelinka ayaanse ku rajaweynahay in cayaaruhu noo bilaaban doonaan, ayuu yiri Tomas Mårtensson.
Cayaaraha fallar-tuurka waxaa Iswiidhen uga qaybgelaya Björn Ferry iyo Fredrik Lindström. Weriyaha Radiosporten oo halkaas wuxuu soo weriyey labada cayaartoyba ay saaka aroortnimadii halkaas ku sugnaayeen.
– Balse markii lagu wargeliyey xaaladdu sida ay tahay ayey dib isaga noqdeen, ayuu sheegay Skött.
Waxaa la filayaa in marka cayaaruhu bilowdaan uu cayaartoyga Noorwey u dhashay halkaas ka muujiyo wacdaro taariikhi ah haddii uu ku guuleysto billadda dahabka ah markii saddex iyo tobnaad.